Jeôgrafianny Repoblikani Kôngô
Kolontsaina ao aminny Repoblikani Kôngô
Jeôgrafianny Repoblika Demôkratikani Kôngô
Maka (any Arabia Saodita)
Tantaranny Repoblikani Kôngô
Tantaranny Repoblika Demôkratikani Kôngô
Ejipta taminny Andro Taloha
Simeona (zanaki Jakoba)
Levy (zanaki Jakoba)
Andry diminny finoana silamo
Fanjakani Israely (Samaria)
Fanjakani Israely (mitambatra)
Ny Beta Israely dia vahoakani Etiopia izay antsoina hoe Falasha koa tany aloha. Atao hoe Jiosy etiopiana izy ireo ao Israely. Ny Beta Israely sasany, sy ny manampahaizana jiosy maro, dia mihevitra fa taranaky ny fokoni Dana izy ireo, tsy araka ny ...
Ny Bene Israely dia iray aminireo vondrona jiosy telo niaina tany India hatraminny tapany faharoanny taonjato faha-20. Ny Bene Israely no vahoaka maro anisa indrindra aminireo Jiosy monina any aminny zana-kontinenta indiana, sady izy ireo no maha ...
Ny foko folo very, araka ny Baiboly hebreo, dia foko nonina tao aminny Fanjakani Israely, izay fantatra koa aminny anarana hoe Fanjakani Samaria, talohanny faharavanity fanjakana ity taminny 722 tal. J.K. ka tsy hita intsony hatraminizay.
Ny Gojaraty na Gojeraty dia vondrom-poko any Azia Atsimo miteny gojaraty, miisa 50 000 any ho any maneran-tany. Ao India no tena betsaka azy ireo, nefa ahitana azy koa ny ao Pakistana sy any amin ny firenena misy ny zanaka am-pielezana indiana sy ...
Ny Pastona na Paktona na Patàna dia vahoaka iraniana mizarazara ho foko lehibe izay miteny pastô indrindra,izay fiteny indô-iraniana. Atao hoe پښتون / Pəx̌tānə́ izy ireo amin ny teny pastô, پختون amin ny teny persana ary پشتون amin ny teny ordo, ...
Ny Kalifaty Omaiada dia anisanny kalifaty islamika lehibe nisy taorianny nahafatesanny mpaminany Mohameda. Io no kalifaty lehibe izay nanjaka ny tany misy ani Pakistana ankehitriny hatraminny tany misy ani Espaina ankehitriny, dia anisanny fanjak ...
Ny fiteny hindỳ dia tenim-pireneni India. Ny isanny olona miteny ny fiteny hindỳ dia misy 480 tapitrisa eo ho eo, 360 tapitrisa aminireo no manana ny fiteny hindỳ tenin-dreny. Aminny lafiny ofisialy, nampiasaina ho lingua franca any India ny fite ...
Ny Balotsy dia vahoaka iraniana monina indrindra ao Balotsistanana izay faritany ao aminny faritra atsimo-andrefan i Pakistana. Ahitana fianakaviambe balotsy koa any Afganistana, any Iràna, any Torkmenistana. Ireo Balotsy ao Afganistana dia monin ...
Ny fiteny manirery dia fiteny tsy nahitana fiteny velona iray fianakaviam-piteny aminy. Ny fiteny baska, ny fiteny kôreana, ny fiteny aino ary ny fiteny borokasy, ohatra, dia fiteny manirery. Ny tsy fahafaha-manaporofo ny tsy fisian ny fiteny ira ...
Ny fiteny indô-ariana dia ireo fiteny mamorona sampana iray ao aminireo fiteny indô-iraniana, izay ao anatinny fianakaviam-piteny indô-eorôpeana. Ao Azia Atsimo no tena ahitana olona maro miteny azy ireo: ao aminny roa ampahatelo avaratri India, ...
Afghanistan - Afrika Atsimo - Albania - Alemaina - Aljeria - Amerika jereo Etazonia - Andora - Angletera jereo Fanjakana Mitambatra - Angola - Antigua sy Barbuda - Arjentina - Armenia - Aostralia - Aotrisy - Azerbaijana
Ny Iranianina dia vahoaka miteny persana, kiorda, tajiky, pastô, ôsetiana, balotsy, ary zazaky mipetraka any Azia Andrefana. 130 tapitrisa eo ho eo no isany manerana izao tontolo izao. Ny fiteny iranianina dia fiteny ao aminny vondrona indô-eorôp ...
Ny fiteny indô-iraniana vondrom-piteny sampan ny fianakaviam-piteny indô-eorôpeana, izay ahitana ireo fiteny iraniana sy ireo fiteny indô-ariana ary ny fiteny noristany.
Lalao Olimpikanny fahavaratra 2012
Ny Lalao olimpika 2012 dia ny Lalao olimpika faha-telopolonny taona ankehitriny, izay hanomboka ny 27 Jolay hatraminny 12 Aogositra 2012 any London. Efa faha-intelony izay i London no mandray ny Lalao olimpika.
Ny Sikorsky H-19 nisy angidimby multi-andraikitry ny Tafika Amerikana. Naorina koa ny teo ambaninny fahazoan-dàlana aminny Westland Fiaramanidina toy ny Westland tafio-drivotra any angletera. Ny dikan ny U. s. Ny tafika an-dranomasina sy ny U. s. ...
I Palestina dia faritra ara-tantara sy ara-jeôgrafia ao Atsinanana Akaiky izay eo anelanelan ny Ranomasina Mediteranea sy ny tany efitra ao atsinanan i Jordania sy ao avaratr i Sinay. Efa hatramin ny taonjato faha-5 tal. J.K. no nahalalan i Herôd ...
Ny Talmodani Jerosalema, izay antsoina hoe koa Talmodani Palestina na Talmodani Israely, dia fanangonan-dahatsoratra mirakitra ny fivoasana ny Misnà sy ny ady hevitra ny aminizany izay nosoratanireo raby tao Palestina hatraminny taonjato faha-2 k ...
Ny Talmoda dia fanangonan-dalàna izay ahitana ny fivoasana ny Torah. Ny Talmoda dia fitambaranny fehezan-dalàna atao hoe Misnà sy ny fivoasana ny Misnà atao hoe Gemarà. Ny zavatra ao aminny Talmoda izay mikasika ny fanapahan-kevitry ny raby momba ...
Yasser Arafat dia mpanao politika, injeniera sivily mizaka ny zom-pireneni Palestina, Ejipta teraka ny 24 Aogositra 1929 tao Kairo ary maty ny 11 Novambra 2004 tao Clamart
Herodiana (fianakavia-mpitondra fanjakana)
Ny Herodiana na dinastia herodiana dia fianakavia-mpanjaka manam-piaviana idomeana. Ny ankamaroanny mpanjaka tao aminio fianakaviana io dia nanapaka tao Palestina sy Israely. Ny mpanjaka herodiana farany tao Israely dia i Heroda Agripa II. Mateti ...
Eosebiosy avy any Kaisarea
Eosebiosy avy any Kaisarea na Eosebiosy Pamfily dia mpanao asa soratra teraka ny 265 ary maty ny 340. Mety tao Palestina no nahaterahany. Mpianatri Origenesy izy ary lasa evekani Kaisarea taty aoriana. Tsy isanireo Rainny Fiangonana na Abanny Egl ...
I Jesoa na Jesosy na Jeso dia Jiosy tany Palestina izay inoan ny Kristiana ho zanak Andriamanitra nirahina ho ety ambonin ny tany hanavotra ny olombelona tamin ny alalan ny fahafatesany sy ny fitsanganany ho velona indray. Izy no foto-pisian ny F ...
Ny Fanjakana nabateana na Fanjakani Nabatea na Nabatea fotsiny dia fanjakana tao aminny ampahanny faritra misy ani Jordania, i Siria, i Arabia Saodita, i Egipta, i Palestina ary i Israely ankehitriny. Nahaleo tena izy hatraminny taonjato faha-4 t ...
Ny Hebreo na Hebrio dia vondrom-poko semitika izay nifindra avy any Mesopotamia na Mezôpôtamia nankany Palestina tamin’ ny taonarivo faharoa tal. J.K. Izy ireo no heverina fa razamben ny Jiosy na Jody ankehitriny. Araka ny Baiboly dia avy any Kan ...
Ny Fikomianny Makabeo dia fikomiana nataonireo Jiosy tao Palestina notarihini Jodasy Makabeo teo anelanelanny taona 175 sy 140 tal. J.K., nanoherana ny fampidirana kolontsaina grika ao aminny kolontsaina jiosy sy niadianny Jiosy mpandala ny fomba ...
Ny Bokin’i Jeremia dia boky ao amin’ny Tanakh sy ao amin’ny Testamenta Taloha ao amin’ny Baiboly kristiana izay mitantara ny fotoana mahatsiravina taloha kelinny hadravanny Babiloniana ny Fanjakani Jodà sy ny nahatanterahanizany noho ny tsy fanaj ...
Tany Masina no iantsoanny Kristiana ani Palestina, izay faritra nahaterahani Jesoa Kristy sy nonenany, ka i Jerosalema, izay toerana nahafatesany sy nitsanganany ho velona, araka ny finoanny Kristiana, no omena lanjany manokana aminizany. Ny nara ...
Ny manga dia zavamaniry, hazo fihinam-boa volena maro any amin ny faritra manana toetanin-jana-pehin-tany mba hahazoana voany maro rantsana, misy voany be nofony. Ny anarany ara-tsiansa dia Mangifera indica L. Ny manga azo mety mahatratra hahabo ...
Ny lavanila na vanila dia zavamaniry mandady, karazana vahy ôrkidea mandady amin ny tohana na zavamaniry matanjaka kokoa noho izy, izay manana taho miendrika varingarina. Lehibe sady be nofo ny voniny nefa matroka. Amin’ ny faritra manana toetani ...
Makoa (vahoakan i Afrika)
Ny Makoa dia vahoaka banto ao Afrika Atsinanana sy Afovoany hita indrindra any amin ny tapany avaratr i Môzambika sy any amin ny tapany atsimon i Tanzania ary any amin ny firenena afrikana sasany toa an i Malaoy, ny tapany avaratr i Madagasikara, ...
Ny fiteny soso dia fiteny ao Afrika Andrefana tenenina indrindra ao Siera Leôna sy ao Ginea. Isanny fitenim-pirenena telo be mpiteny indrindra ao Ginea ny fiteny soso
I Jean - Raymond Boulle no mpanorina orinasa efatra manana tahirin akorana nikela sy kôbalta sy zinka sy titàna ary diamondra.
Ny diamondra dia iray amin ny endrika mineralin ny karbôna izay mipetraka eny an-tampon ny filaharan ny vato sarobidy amin ny hamafy sy amin ny vidiny, izay miseho amin ny endrika maro, ka ny fantatra indrindra dia ny diamondra kristaly fanao fir ...
I Somera sy i Babilôna Toeram-piampitana eo anelanelan’ i Egipta sy Mesôpôtamia i Siria, ka maro ny fananiham-bohitra nahazo azy, ary ao ihany koa matetika no iangan’ ny fanafihana mankany amin’ ny faritra hafa. Tamin’ ny taonarivo faha-3 tal. J. ...
Moustapha Akkad dia mpamoaka horonantsary, talen-koronantsary mizaka ny zom-pireneni Etazonia, Siria teraka ny 1 Jolay 1930 ary maty ny 11 Novambra 2005 tao Amman
Joanesy avy any Damaskosy
I Joanesy avy any Damaskosy na J aona avy any Damaskosy na Joany avy any Damasy dia mpanao asa soratra, mpanoratra mizaka ny zom-pireneni Siria teraka taminny taona 676 tao Damaskosy ary maty ny 4 Desambra 749.
I Amerika Atsimo dia kôntinenta na zana-kontinenta sady ampahany atsimo amini Amerika. Ao aminny ila-bolantany andrefana tanteraka, ary indrindra ao aminny ila-bolantany atsimo no miosy azy. Ny Oseana Pasifika no mamaritra azy ao andrefana, ny Os ...
I Amerika Afovoany dia andilan-tany mampitohy ani Amerika Avaratra sy i Amerika Atsimo. Ny fahasamihafana misy eo aminny sisin-tany afa-jeôgrafia sy ny sisin-tany ara-politika, ary ny tantaranny fanjanahan-tany sy ny fisiam-pitoviana sy fahasamih ...
Ny fiteny ao Amerika Avaratra dia ireo fiteny tenenin ny mponina ao amin io ampahan-kôntinenta io, izay ny ankamaroany dia nampidirin ireo mpanjana-tany eorôpeana. Taloha dia niely ny fiteny amerindiana, nefa ankehitriny dia voasolon ny fiteny eo ...
I Amerika Latina, amin ny ankapobeny, dia ny faritr i Amerika misy ireo firenena manao ny fiteny rômana ho fiteny ôfisialy. I Amerika Latina dia mahafaoka an i Amerika Hispanika sy nosy Karaiba sasany, ary saika i Amerika Atsimo sy i Amerika Afov ...
Ny fanjanahantany dia ny fandaminanny firenena iray toerana hafa, mba ho mpitondra anilay firenena vaovao, ary mba hiaina ao aminilay tany vaovao. Taminny 1492, nahita ani Amerika i Christophe Colomb. Izay no nahafantaranny eoropeanina momba ny f ...
en) Mississippi Band of Choctaw Indians ofisialy en) Choctaw Indian Fair en) Choctaw - Joshua Project en) Pearl River Resort Ny lahatsoratra Choctaw ambonny Encyclopedie-ny Terataninny Amerika Avaratra cho) Wikipedia Choctaw
Ny fiteny ao Amerika Atsimo dia fiteny maro isan-karazany, ka isan izany ireo fiteny amerindiana ao Amerika Atsimo izay mahatrara 600 isa any ho any, voatsinjara ao amin ny fianakaviam-piteny 118. ahitana fiteny miisa 32, ohatra, ny ao Bôlivia iz ...
Ny Venezoela, na Repoblika Bolivarianini Venezoela, dia firenena any avaratra ny Amerika Atsimo. es) Tranonkala ofisialinny governemanta Venezoelianina es) Fitondrananny Repoblika Venezoelianina fr) sokajy Venezuela ao aminny dmoz
Ny Arapahôh na Arapahos na "Gens de vaches" dia mponina tera-tany ny amerika miaina eo aminy staty ny Colorado sy Wyoming. Izy dia namanamanani Sayena sy namanani Dakota manomeha enklavy algônkina zareo miarakaminy Sayena eo andrefani tany lemaka ...
Ny teny algônkiana dia fianakavinanteny misy miteny any Amerika avaratra ao anatinio misy ny ankabiazanny teny Aljika (ny sasana sia wiyot, yurok any avaratra-anderani kalifornia ; tokony tsy afangaro ny teny algonkiana sy ny algonkina.
Ny fiteny italiana dia ny fiteny tenenina any Italia, any San Marino ary any Vatikàna. Isanny fiteny rômana ny fiteny italiana izay teneninny olona miisa 66 tapitrisa any ho any. Heverinny mpahay teny ho teny tokana mizara fitenim-paritra maro ny ...
Lalao nosy ranomasimbe Indiana
Ny Lalaonny nosy eto aminny Ranomasimbe Indiana dia fifaninanana ara-panatanjahantena na fihaonanireo nosy ao atsimo-andrefana aminny ranomasimbe Indiana. Nanomboka taminny taona 1970, ny daty nanokafana io lalao io voalohany. Miverimberina isaky ...
Ny nosy Andamàna dia tamba-nosy ao avaratra atsinanan ny Ranomasimbe Indiana, ao amin ny Ranomasin i Andamàna, mikambana amin i India, ahitana nosy miisa 204 ka 38 no misy olona monina. I Port Blair no tanàna lehibe indrindra ao sady rehivohiny. ...
Ny nosy Nikôbara dia tamba-nosy ao aminny Ranomasina Andamàna ao aminny tapany avaratry ny Ranomasimbe Indiana, mitambatra amini India. Mandrara ny olona tsy Indiana handeha ao aminireo nosy ireo ny fitondram-pananana indiana. Nosy miisa 22 no ma ...
Jeôgrafianny Repoblika Demôkratikani ..
Famongoran-taranaka nahazo ny Totsy t ..
Fiangonana Loterana Evanjelika ao Ame ..
Fiangonana Malagasy Tranozozoro Antra ..